नबोलाइएको भेला, मृगस्थलीमा- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
हनुमान बाहेक तीनै जनामा हिजोदेखि कोरोना देखिएछ । त्यति लामो बाटो मास्क विनै हिंडाएपछि के हुन्छ ?
वैशाख ११, २०७८ शरच्चन्द्र वस्ती
शान्तिमणि मलाई देखेर गद्गद भएका थिए । त्यस दिन मेरो व्यंग्यलेख छापिएको अखबार उनको हातमा थियो । जोशिलो नमस्कारसँगै आग्रह गरे, ‘आज त साँच्चै जेरी खानैपर्छ ।’
शनिवारको दिन थियो । म डाक्टर कृतान्तसँग मर्निङ वाकमा मृगस्थली पुगेको थिएँ । घाम झुल्कँदै थियो । शान्तिमणिको आग्रह यति स्नेहिल थियो, मैले नाइँ भन्नै सकिनँ । मुस्कुराएँ मात्र ।
हामी एकछिन सँगै घुम्यौं । उनले लेखको प्रशंसा गरिरहे । केही वेर पछि चिन्ता जाहेर गरे, ‘नेताहरूलाई पूरै नांगेझार पार्नुभाको छ । योभन्दा बढी के लेख्नु ? तर के गर्ने, जति लेखे पनि सुध्रिने होइनन् ।’ मैले भनें, ‘उहाँहरू पढाइलेखाइ भन्दा माथि उठिसक्नुभाको छ । यस्ता तुच्छ कामबाट टाढै बस्नुहुन्छ । तपाईं चिन्ता नलिनोस् । म लेख्छु, तपाईं पढ्नुहुन्छ । भैगो नि ।’
त्यतिन्जेल घाम अलिक माथि आइसकेको थियो । ‘अब त शीत पनि सुक्यो । चउरमा बसौं,’ डाक्टरले भने । हामी बस्तै मात्र थियौं, भ्रान्तिमणि कराउँदै आइपुग्यो, ‘क्या हो पासा, के लेखेको त्यस्तो ? लेख्न पाएँ भन्दैमा जे पनि लेख्ने ? अब तिम्रो लेख कसैले पढ्दैन । के बुझ्यौ ?’
‘तिमीले पढिहालेछौ । मलाई पुगिहाल्यो नि,’ म मुस्कुराएँ । ऊ चिढियो, ‘होइन, मैले तिम्रो के बिगार्‍या छु र अरू कोही नपाएर मलाई नै छेड हान्नुपर्‍यो ?’
म जिल्ल परें, ‘तिमीलाई के छेड हानें र मैले ?’
‘कुखुराचोर भन्या के त ?’
‘त्यो तिमीलाई भन्या हो र पासा ? अरूलाई नै भन्या नि ।’
‘मलाई बेकूफ नबनाऊ न । मेरो टोलमा कसलाई कुखुराचोर भन्छन्, मलाई थाहा छैन र ?’
हामी जोडले हाँस्यौं । यतिन्जेल अरू १०–१२ जना भेला भइसकेका थिए । अरू दिन मर्निङ वाक सकेर सोझै घर फर्के पनि शनिवार एक–डेढ घण्टा हामी चउरमा बसेर गफिन्थ्यौं, चियाको चुस्की लिंदै ।
त्यस दिन शान्तिमणिलाई के घत परेको रहेछ कुन्नि, जेरी मात्र मगाएनन्, अखबार खोलेर मेरो व्यंग्यलेख वाचन पनि गरे । सुनुन्जेल सबै एकाग्र थिए । त्यसपछि पनि एकछिन मौन कायम रह्यो । दुई जनाले ‘आहा !’ भनेर प्रशंसा गरे । भ्रान्तिमणिले पुनः आफ्नो राग अलाप्यो, ‘अरू त ठीक छ, त्यो कुखुराचोर भनेको चाहिं मिलेन ।’ के मिलेन, पत्तो नपाएर अरू अलमल्ल परे ।
रघुनाथ, भोला, पासाङ, रुक्मिणी र विनयले क्रमशः टिप्पणी गरे :
‘लेख छोटो भयो, पढ्दापढ्दै सकिन्छ ।’
‘अन्त्य अझ धारिलो बनाउनुपर्थ्यो ।’
‘आम जनजीवनको पीरमर्का समेटिएन ।’
‘कता कता पुरुष मानसिकताको गन्ध आउँछ ।’
‘कस्तो व्यंग्य हो यो ? मलाई एकचोटि पनि हाँस उठेन ।’
भर्खरै वनकालीको स्कूलमा नेपाली पढाउन थालेको चन्द्रेशले भन्यो, ‘मलाई त भाषा, शैली, विषयवस्तु र प्रस्तुति पनि असाध्यै मन पर्‍यो ।’
झुस्स दारी पालेका, माकलटोपी मुनि गोलो चश्मा भिरेका प्राडा भुजंगपाणिलाई खपिनसक्नु भएछ । उनले चन्द्रेशलाई टिप्पा ख्वाए, ‘के ज्ञान छ तपाईंलाई साहित्यका बारेमा ? यस्तो पनि साहित्य हुन्छ ? रस खोइ ? भाव खोइ ? अलंकार खोइ ? कलात्मकता खोइ ? शब्दको गहनता खोइ ? यसको उद्देश्य के ? प्रयोजन के ? समाजलाई सन्देश के ? यसमा न भरतमुनिको रस सिद्धान्त र आनन्दवर्धनको ध्वनि सिद्धान्तले काम गरेको छ, न त प्लेटोको अनुकरण सिद्धान्त अथवा अरस्तूको विरेचन सिद्धान्तकै प्रयोग भएको छ । कुन्तकको वक्रोक्ति सिद्धान्त र भामहको अलंकार सिद्धान्तले यसलाई स्वीकार गर्दैन । क्रोचेको अभिव्यञ्जनावाद अथवा डेरिडाको विनिर्माणवादसँग पनि यसको कुनै सम्बन्ध देखिंदैन । यसबाट रसनिष्पत्ति कसरी गर्ने ? यसलाई कुन सिद्धान्तका आधारमा राम्रो भन्ने ? व्यंग्य भन्ने कि हास्य भन्ने ? व्यंग्य भए हास्य खोइ ? हास्य भए व्यंग्य खोइ ? दुवै भए किन दुवै हुनुपरेको ?’
उनको वमन–विद्वत्ता थाम्न नसकेर सबै जना आकाशतिर हेर्न थालेका थिए । चन्द्रेशले भर्खरै खाएको जेरी समेत चिया हुलुक्क गर्‍यो र लल्याकलुलुक भएर एकातिर ढल्यो । प्राडा भुजंगपाणि ऊतिर पुलुक्क हेरेर गर्वसाथ जुरुक्क उठे र ‘शम्भो... हर’ भन्दै बाटो लागे । अनुहारमा पानी छम्केपछि, एक छिनपछि चन्द्रेशले आँखा खोल्यो ।
‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ प्राडा भुजंगपाणिबारे कसैले टिप्पणी गर्‍यो । डाक्टर कृतान्तले मुख खोले, ‘गुरुबा त ठिमी जान्छु भनेरै ठिमीतिर लागेका हुन् । हामीकहाँ त एकातिर हिंडेको मान्छे अर्कातिर पुग्छ र पो आपत । सबैलाई अल्जाइमर भएजस्तो !’
डाक्टरको कुराले सबैलाई गम्भीर बनायो । ‘त्यो स्मृति–विभ्रम हो । यस्तो वेला मान्छेको दिमागले काम गर्दैन । अहिले नेताहरूलाई लागेको रोग नै यही हो । सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः,’ कालो–दारीवाल जोगीले शास्त्र–प्रमाण प्रस्तुत गरे । ‘त्यही भएर होला, यस्तो गाईजात्रा भएको,’ पत्रकार हरिबाबु बोल्यो, ‘के हुन लाग्या हो, हामीले बुझ्नै छोडिसक्यौं ।’
‘के भयो हौ त्यस्तो ? भन न,’ कसैले उक्सायो ।
‘के भन्नु अब ?’ हरिबाबुले सुनायो, ‘कोरोनाले मान्छे सोत्तर हुने भए, अस्पताल जान्छु भनेर हिंडेको मन्त्री भ्यूटावरको निरीक्षण गर्न पुग्यो । अविश्वासको प्रस्तावमा सही गर्न गएका विधायक मन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेर आए ।’
‘अल्जाइमर भएरै त होला नि,’ अर्को पत्रकार गिरिबाबु चूप लाग्न सकेन, ‘आफ्नो अध्यक्षलाई भेट्न हिंडेका नेताहरू विपक्षीकहाँ पुग्छन् र तपाईं नै हाम्रो नेता हो, लौ न हाम्रो सरकार गिराइदिनुपर्‍यो भनेर भजन–कीर्तन गर्न थाल्छन् । विपक्षको नेता चाहिं तिनीहरूको सरकार गिर्ला कि भन्ने चिन्ताले रातभरि निदाउँदैन ।’
कालो–दारीवाल जोगी मुस्कुराए, ‘ठीक भन्नुभो । त्यही भएर त, यो देशबाट धर्म सिध्याउँछु भनेर हिंडेको एउटा नेता आजभोलि रामनामी ओढेर राम मन्दिरको पुजारी भएको छ । ईश्वरको नाम लिए जिभ्रो काटेर फ्यालिदिन्छु भनी हिंड्ने अर्को नेता रामनाम जप्न थालेको छ । यो अल्जाइमर पनि काइदाकै रोग रहेछ...’
सेतो–दारीवाल जोगीले उसलाई रोके, ‘तर अहिले त अर्कै समस्या खडा भएको छ ।’
‘के बाबा ?’ सबै जना उनको मुखमा हेर्न थाले । ‘अस्ति यहाँबाट त्यत्रो धूमधामसँग राम–सीता, लक्ष्मण, हनुमान सबैलाई माडी लगेको, हनुमान बाहेक तीनै जनामा हिजो बेलुकादेखि कोरोना देखिएछ । त्यस्तो भीडभाडमा त्यति लामो बाटो मास्क विनै हिंडाएपछि के हुन्छ ? उनीहरूको पुरानो फेमिली डाक्टर सुषेणलाई श्रीलंकामा फोन गरेर सोध्दा एउटा हिमाली जडीबुटीको नाम लिएछ र हनुमान राति नै हिमालतर्फ उडेछन् । अलिअलि अल्जाइमरले त उनलाई पनि छोएकै थियो, हिमालको सट्टा डोल्पाको डाँडामा झरेछन् र टर्च बालेर जडीबुटी खोज्न थालेछन् । डोल्पालीहरूले यार्चागुम्बा चोर्न आएको भनेर लखेटेछन् र हनुमान ठाडो पुच्छर लगाएर रित्तो हात फर्केछन् । अलिक तलसम्म त ह्याङ ग्लाइडरबाट आकाशमा पनि पीछा गर्दैथिए अरे । अहिले चारै जना क्वारेन्टाइनमा छन् ।’
‘जय श्रीराम !’ सेतो–दारीवालले आकाशतिर फर्केर हात जोड्यो । ‘यसबारे तपाईंले लेख्नुपर्छ,’ शान्तिमणिले मलाई सम्बोधन गरे ।
‘हुँदैन,’ म बोल्नु अघि नै डाक्टर कृतान्त बोले, ‘यो कोरोनाको केस हो । यसको केस–स्टडी हामीले गर्ने हो ।’
‘म के गर्नु त ?’
‘तपाईं त्यतिन्जेल आराम गर्नोस् । नत्र तपाईंलाई पनि अल्जाइमरले छोला,’ डाक्टर हाँसे ।
एकातिर कोरोनाको त्रास, अर्कातिर अल्जाइमरको डर । अब डाक्टरका कुरा कसरी नमान्नु ? मैले भनें, ‘हुन्छ नि त । म केही दिन थकाइ मार्छु ।’
‘साँच्चै कि ठट्टा गरेको ?’ उनले पत्याएनन् ।
‘कस्तो नपत्याएको ?’ मैले भनें, ‘बोलिसकें त, म अब केही दिन थकाइ मार्छु भनेर ।’
उनले नपत्याए पनि तपाईं चाहिं पत्याउनोस् है !
प्रकाशित : वैशाख ११, २०७८ १०:४८